धुम्बाराहीमा भीम रावलको ईन्ट्रीपछि ल्याए यस्तो नयाँ प्रस्ताव, ओली पनि भए मञ्जुर ! – Enepali Samchar
March 15, 2021 adminLeaveaComment on धुम्बाराहीमा भीम रावलको ईन्ट्रीपछि ल्याए यस्तो नयाँ प्रस्ताव, ओली पनि भए मञ्जुर !
e nepalisamchaar/काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका दुई पक्षबीच धुम्बाराहीमा भेटवार्ता जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा आजको भेट तय भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भनिएको भेट माधव पक्षले धुम्बाराहीमा माग गरेपछि ओली त्यहाँ पुगेका छन् ।
माधव नेपालका पक्षबाट डा. भीम रावल लगायतका नेताहरु धुम्बाराही पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि माधव पक्षका नेताहरुको जमघट बानेश्वरमा भएको थियो । केही समयदेखि ओली र माधव पक्षबीच तिक्तता देखिएको थियो ।
माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओली नसच्चिएसम्म मिलेर जान नसक्ने बताएको छ । ओलीले एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्न खोजेपछि पार्टीमा विवाद सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै माधव पक्ष लिखित समझदारी खोजिरहेको छ ।
यता, एमालेका उपाध्यक्ष डा. रावलले आफ्नो अडान नछोड्न नेपाललाई सुझाएका छन् । पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानका निम्ति दुवै पक्षले याचना गर्नुपर्ने रावलको तर्क छ । अहिलेसम्मका गतिविधिमा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओली नै बढी दोषी रहेको नेपाल पक्षको तर्क छ । पार्टी एकतादेखि विघटनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख हात रहेको नेपाल पक्षका नेता, कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
आजको भेटलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमालेमा देखिएको तिक्ततालाई मेट्न र एकढिक्का भएर अगाडि आजको बैठक कोशेढुंगा सावित हुने धेरैको तर्क छ ।
यता, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार बनाउने रणनीति लिएसँगै ओली छलफलका लागि अग्रसर भएका छन् । नेपाल पक्षका नेता एमालेका उपाध्यक्ष राववले दुवै पक्षले गल्तीको क्षमायाचना गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
म लाई ग’र्भवती बनाउने लाई ३ लाख नगत दिन्छु स’म्पर्क नम्बर सहित…
अब नेपालमै केहि गर्छु भन्नेलाई सरकारले दिने भयो ५० लाख ! कसले-कसले पाउँछ ? अनि कसरी पाउछ : पुरा जानकारी लिनुहोस्
आयो यस्तो खबर काठमाडौँ र वरिपरि भोलिबाटै सबै सवारी साधन बन्द हुनसक्ने !